N'ogbe PITA ire Cup Manufacturer na Supplier | Copak
Dịka onye na-eweta ngwaahịa na-elekọta mmadụ, Copak nwekwara ọrụ maka vinggbanye nrụgide ọrụ, ịkwalite ikike nke ndị ọrụ, yana inye onyinye na ọha mmadụ. Na anyị n'ezie bara uru omume, anyị na-achọ ịghọta ihe adabako ịdị n'otu nke enterprise, mkpara, na otu.
Nke anyi PITA tast atọ cup eji maka uto nri. A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ mmanya na ebe ndị ọzọ maka yogọt na-atọ ụtọ ndị ahịa, ihe ọ juiceụ juiceụ, ihe ọ beụ smoụ, ice cream, smoothies, kọfị, mmiri ara ehi na ịkwalite ya. Ọdịiche ya dị iche iche na-egbuke egbuke ma dị mfe ma na-adịgide adịgide ga-egosipụta ihe ngosi akpụrụ mmiri na ihe ọveraụveraụ kachasị amasị gị. Ndị a dị egwu maka soda, beer, mmanya, ihe ọ mixedụ mixedụ a mixedụ, mmiri, na ndị ọzọ!
Shatterproof imewe awade ukwuu mgbanwe were iji gbochie ntapu na wụsara Space-azọpụta ikpe size awade oru oma nkwakọ ngwọta maka ulo oru Zuru okè maka ezumike ụlọ, n'ikuku ebe na ndị ọzọ Jiri maka oyi na-averageụ ihe ọ consumptionụ consumptionụ.
Mostfọdụ ndị a ma ama PITA tast atọ cup nkọwa n'okpuru. E wezụga nke a, anyị nwekwara mpịakọta na nha na ụdị ndị ọzọ. Naanị zitere anyị ihe ị chọrọ, a ga-aza ajụjụ gị ozugbo enwere ike.
PITA ỌASTụ iko usoro
Esi zụta nke anyị PITA NTAST IRI
Zitere anyị ajụjụ gị, ọnụahịa e hotara, PI mere, nkwụnye ego nkwụnye ego mere, imepụta amalite, obibi, nyocha tupu ngwugwu, ịkwụ ụgwọ itule. Ẹnam ekese.
Nke gara aga: PET Cup mkpuchi
Osote: 12oz plastic iko
Clear PET iko